Yabucala yeendwendwe Suite Historic Downtown Bryan
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguKasey
Zive usekhaya kule ndlu yeendwendwe esanda kulungiswa, uhambo lwemizuzu emi-5 ukuya kwidolophu yaseBryan eyimbali. Le ndawo yokuhlala yabucala, ikhitshi, ibhedi / ibhafu, kunye nendawo yokupaka ibekwe kwisitrato esikhuselekileyo, esingenazo itrafikhi, ebumelwaneni nekhaya elihle lamaKholoniyali lamaDatshi elakhiwe ngo-1913.
Nokuba uyazivuyela ii-Aggies (iikhilomitha ezi-6 ukusuka eKyle Field), okanye ufuna indawo yokuphumla ezaliswe ziivenkile zekofu eziqhelekileyo, imarike yomfama, iiboutiques ezinomtsalane & neendawo zokutyela, uqinisekile ukuba ubuyela kwi #ThePrestonPlace kwakhona. (I-WIFI ekhawuleza kakhulu)
Zonke iinkcukacha zibalulekile ngexesha lokuhlala kwakho #ThePrestonPlace. Le ndawo isanda kulungiswa ilungele ukutyelela usapho, iindwendwe zosuku lomdlalo, amadoda/amabhinqa ahambahambayo amashishini, ukubaleka komhlobo, okanye izibini ebusuku ngaphandle! Zonke iimfuno zakho ezisisiseko ziya kubonelelwa (kwaye ke ezinye), kunye neenkcukacha zokwamkela ezenzelwe wena ukuhlala kwakho.
Olona qwalaselo lukhulu lunikiwe ukubonelela ngomgangatho, i-hypoallergenic, kunye noomatrasi abatofotofo, amashiti, kunye neetawuli. Ukongeza kwizinto ezitsha zasekhitshini (umenzi wekofu, izitya, iimbiza / iipani, izinto zokupheka kunye neziqholo), #ThePrestonPlace ibonelela: iwasha / isomisi, igumbi elivulekileyo, igumbi labucala langaphandle elinetafile, izitulo, kunye nezibane.
Okona kubaluleke kakhulu, i-suite yakho ixhaswa yimodem ye-WIFI yangasese, eqinisekisa ukuba ukhawuleza umbane wesantya kunye nokusasaza kwi-smart TV (i-DVD player inikeziwe).
• Indawo yakho yokungena yabucala iya kufakwa ikhowudi kwimivo emine yokugqibela yenombolo yefowuni esetyenziswa xa ubhukisha ukuze kube lula kwaye kube lula. Akusekho kuphuthaphutha ngezitshixo! Yiza uhambe njengoko uthanda ngexesha lokungena!
Ukuphuma: (12:00pm) uluhlu lokuphumayo luya kubonelelwa kwindawo yakho xa ufika.
Igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela:
• Ibhedi e-1 egcweleyo enegumbi lokuhlambela laBucala
• Iibhedi zeBunk (2 amawele)
• Iwotshi yedijithali enezibuko zokutshaja ze-USB
. Ukukhanya kokufunda kwindwendwe nganye
• Iilinen ezimhlophe ezikumgangatho ophezulu, imiqamelo kunye nezithuthuzeli
• Kwikhabhathi enkulu enehanger, iayini/ibhodi, ilinen ezongezelelweyo, isifuba seedrowa.
. Ifeni emileyo eneempawu zokurhoxisa ingxolo.
. Isibuko sokwenza, isomisi seenwele, iimfuno ezisisiseko zokuhlambela.
Igumbi lokuhlala kunye ne-Electronics:
• 40" Smart TV eneNetflix kunye nezinye ii-apps
. Umdlali weDVD onengqokelela enkulu yeemuvi
. Imidlalo & amakhadi
• Izitulo ezi-3 zeBarstools, isitulo esi-1 esitofotofo sesikhumba, iindawo zokuhlala ezi-2 ezongezelelweyo
. Idesika enezibane, ukubhala & nezixhobo zokufaka imibala zabantwana
• Isofa e-1 etofotofo enemiqamelo kunye neengubo
• Ukukhanya okushushu kunye neencwadi ezinomdla.
• I-oveni, isitovetop, imicrowave, ioveni yetoaster
. Isikhenkcezisi esigcweleyo kunye nesikhenkcezisi esinembiza yokucoca amanzi
• Umenzi wekofu kunye nomatshini weKeurig NGEKOFU
• Izixhobo, izinto zokupheka nezinto zokucoca
• Iikomityi, iimagi zekofu, iiglasi zewayini kunye nezitya
• Ioyile yomnquma, ityuwa & ipepile, iziqholo zokupheka
• Ii-cookie sheets, iimbiza neepani, umatshini wokuhlamba izitya
. Isitulo esiPhezulu kunye netafile yomntwana ohambahambayo w/izitulo ukuba ziyafuneka
• Iindawo zokutyela ezigqwesileyo kumgama wokuhamba ukuze ungasebenzisi naziphi na kwezo zinto ukuba awufuni kuba useholideyini, darn it!
• Ubungakanani obugcweleyo bokuhlamba, isomisi esipheleleyo
• Isepha yokuhlamba
• Iishiti zokomisa
• Iayini kunye nebhodi yoku-ayina
Njengoko besitshilo ngaphambili, yonke ikwinkcukacha. Mhlawumbi uyakuxabisa intlama yamazinyo eyongezelelweyo & nezinto eziyimfuneko ezikulindileyo ukuba uzilibele eyakho; umzobo wokuqala ujinga ezindongeni; okanye ipatiyo yegadi yezityalo. Siyathemba ukuba uyakwazi ukuziva ukhululekile, usekhaya, kwaye wonwabe ngelixa ulapha!
Le yindlu yeendwendwe ephezulu enomnyango wabucala & yokupaka yabucala; ibekwe ngaphezulu kwegaraji ezolileyo edibana nekhaya lembali. Le suite ayifikeleleki ngesitulo esinamavili. Indawo yakho yokungena ijonge kwiSitrato sasePreston, ebumelwaneni kuphela likhaya lommkeli wakho kunye nendawo yokupaka icawa. Wamkelekile ukuba usebenzise indawo yokupaka ukwamkela iindwendwe ezongezelelweyo ngexesha lasemini, kodwa ziindwendwe ezibhalisiweyo kuphela ezivunyelwe ukupaka bucala ngobusuku. Iikhamera zokhuseleko kwindawo yokupaka kunye nokungena kwizinyuko KUPHELA ziya KUSETYENZISWA ngexesha lokuhlala kwakho. Akukho zikhamera zangaphakathi. Akutshaywa ngaphakathi. Wamkelekile ukuba utshaye kwindawo yepatio. Akukho zilwanyana zasekhaya zivumelekileyo. Iiyure zokuzola ziya kunyanzeliswa ngo-11:00pm-akukho mculo ungxolayo, akukho ncoko ingxolayo ngaphandle okanye amatheko. Nceda USUKU kungena igaraji engezantsi kwendlu okanye kwiyadi yomninimzi yabucala. Enkosi ngokuqwalasela kwakho.
1 ibhedi elala abantu ababini, ibhedi ekhwele kwenye eyi-1, umatrasi ompontshwayo oyi- 1
I-TV ene-I-Roku, I-Netflix, I-Amazon Prime Video, izitishi zeTV eziqhelekileyo
Uya kubona kwakamsinya ukuba kutheni #ThePrestonPlace yindawo yokuhlala enye-ye-a-uhlobo! Ikhatywe yimithi emikhulu ye-oki & nesibhakabhaka esisembindini yedolophu yaseBryan, amava akho aya kuba njengencwadi yamabali, njengoko uhamba ngamaphepha anxitywe kakuhle eSithili seMbali sase-Eastside.
Apha uya kufumanisa: iimpawu zembali kunye namathala eencwadi, iipaki ezintle, eyona venkile yekofu ibalaseleyo edolophini (Ukuvuna), okona kutya kulungileyo kwaseMexico edolophini (Casa Rodriguez & Papa Perez). Tyelela iHotele edumileyo yaseLa Salle, okanye, wonwabele ubomi basebusuku kunye ne-brew enkulu / i-cocktails (iNkawu enebhongo, onke amadoda kaKumkani, eDowntown engafakwanga). Ngaba unqwenela eyona pizza ilungileyo? (uMnu G's Pizzeria) uye wakugubungela! Onke amanyathelo asuka kude #ThePrestonPlace
Molo kwaye wamkelekile kwi #ThePrestonPlace! Siyavuya kuba ulapha kwaye sifuna ukwenza konke esinako ukwenza ukuhlala kwakho kube ntofontofo kwaye kungenaxhala kangangoko kunokwenzeka! Nceda uzive ukhululekile ukuthumela umyalezo nangaliphi na ixesha. Siza kuphendula ngokukhawuleza.
Nceda uqaphele, ASAKUBIZWI IMALI YOKUCOCA ukugcina ixabiso lakho liphantsi. Endaweni yoku, nceda ubophelele ngobubele uluhlu lokutshekisha olushiyelwe wena kwiqela.
Ukongeza, SIFUNA UBUSUKU OBU-2 UBUNCINCI BOKUHLALA NGEEveki-veki (ngoLwesihlanu-ngeCawa). Kwakhona siya kuhlawulisa i-50 yeedola ngobusuku obunye kuzo naziphi na iindwendwe ezingabhaliswanga ezihlala ubusuku bonke. Sijonga oku ngeekhamera zethu zokhuseleko. Nceda ubhalise zonke iindwendwe ezijoliswe ngobusuku ngexesha lokubhukisha, okanye uya kuhlawuliswa imali eyongezelelweyo.
Enkosi ngokusisikelela ngokuhlala kwakho! Sijonge phambili ekukhonzeni.
UJustin & Kasey
Molo kwaye wamkelekile kwi #ThePrestonPlace! Siyavuya kuba ulapha kwaye sifuna ukwenza konke esinako ukwenza ukuhlala kwakho kube ntofontofo kwaye kungenaxhala kangangoko kunokwenz…